Avido WiBa, chaja ikuku ikuku 2-in-1 dakọtara na Qi caji | Akụkọ akụrụngwa
Avido WiBa, chaja ikuku ikuku 2-in-1 dakọtara na Qi na-akwụ ụgwọ
Ma nke ahụ bụ na ugbu a na mbata nke ikuku na-akwụ ụgwọ na ụdị Apple ọhụrụ, iPhone X, 8 na 8 Plus, o yiri ka enwere mmasị karịa site na ụdị iji malite ngwaahịa ọhụrụ na nke a. Ekwesịrị ikwu ya ọ bụ ihe na-eme ọfụma iji nwee ike ịgba ụgwọ ngwaọrụ gị n’ọdụ ụgbọ mmiri Qi na enweghị obi abụọ ndị na-eji ụdị ibu a ogologo oge ga-anọnyere m na ọ bụghị dabere na ijikọ eriri na-eme ka ha bụrụ ngwa ndị na-adọrọ mmasị maka ihe niile.
N'okwu a, na mgbakwunye, Qi chaja sitere na ụlọ ọrụ Ávido ga-enye anyị ohere ịnweta abụọ ahụ maka otu nke anyị na-ekwuwapụta na aha ekele maka nhọrọ nke na-enye anyị ohere iwere. a zuru ezu mpụga batrị n'otu oge. Nke a bụ ihe ọtụtụ ndị ọrụ dị arọ ga-enwe ekele maka.
WiBa, bụ Qi wireless chaji isi nke nwere mgbakwunye dị mkpa, 5.000 mAh batrị mpụga nke nwere ike ibu n'elu nri nke a na nke a bụkwa Qm, nke ga-enye anyị ohere ịgba ụgwọ ngwaọrụ na-enweghị eriri. Yabụ, n'ụzọ dị otu a mgbe anyị na-akwụ ụgwọ batrị nke ama anyị (onye ọ bụla nabatara Qi na-akwụ ụgwọ) na-enweghị eriri, anyị nwere ike ịkwụnye batrị dị na mpụga n'otu oge iji doo anya na anyị ga-abata na njedebe nke ụbọchị na ụgwọ na anyị ama. Nke a ga-abụ "Sanwichi" nke isi ahụ na-enye anyị ohere WiBa:
N'okwu a ọ bụ isi nke na-agbakwunye isi abụọ nke na-enye anyị ohere ịme ụgwọ "ntinye" nke ọma, ọ kwekọrọ na "Ọsọ ọsọ" n'agbanyeghị na ọ bụ eziokwu na ọ bụghị kpamkpam nkọwapụta nkọwa ngwaahịa ma ọ bụrụ na ọ ga- arụ ọrụ n'ezie na ibu 7.5W. Ozi ọzọ dị mkpa bụ iji ntọala a kwuo okwu n’ọdịnihu, nke ahụ bụ na anyị na-ekwu “ọ ga - arụ ọrụ” n’ihi na ọ ga - arụ ọrụ Maka ịzụta mgbe afọ a gasịrị 2018 na ọnụahịa mmeghe nke $ 99,95. Ọ bụghị na ọ bụ otu n'ime ọnụ ala dị ala nke anyị ga-ahụ n'ahịa, mana ọ nwere ike bụrụ azịza na-adọrọ mmasị maka ihe karịrị otu n'ime anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » Avido WiBa, chaja ikuku ikuku 2-in-1 dakọtara na Qi na-akwụ ụgwọ